Mitemo ye Blackjack mu Zimbabwe | BlackJack77
Chikuru	/ Blackjack Mitemo
Mitemo ye Blackjack
Kudzidzira kutamba blackjack hakutore nguva refu. Zvinongoda shungu, nebhuku remitemo rakareruka rematambirwo eblackjack
Nyanzvi dzedu dzakagadzira gwara rakareruka richakudzidzisa matambirwo eblackjack nekukurumidza. Kana uchida kudzidza matambirwo eblackjack haufaniri kusiirira mamwe matanho.
Kana waziva zvakakosha, uchaona kuti uchakurumidza kubata matambirwo eblackjack sezvinoita nyanzvi. Mazano edu akarerukira vachangotanga, achakubatsira kupedza danho rekupedzisira mukudzidzira nekugadzirira mutambo chaiwo.
Kana uchida kuramba uchikunda, zvakakosha kuziva zvose zvinechekuita nekubheja pablackjack. Muchidimbu, unoisa mabheji ako ekutanga mutengesi asati akupa makadhi, uye unokwanisa kuwedzera mamwe mabheji panguva iri pamberi, panguva yeruoko urwu.
Mibairo inokwezva ndiyo chikonzero chikuru chekuti uise shungu uye utsvage matambirwo anoitwa 21 blackjack. Chinhu chikuru pamutambo uyu, ndechekuti wakakodzera kutambwa nevane nguva vachiutamba, nyanzvi, pamwe nevarikutsvaka mafaro nekuzorora vachitamba zvavo mumhepo.
Mitemo yeBlackjack yaunofanira kuziva usati watanga kutamba
Shandisa dheki rimwe chete kusvikira kumasere zvichienderana necasino yaunenge uchitambira, madheki akatiwandei ndiwo unotambwa nevazhinji.
Nhamba yakakosha ndi 21, mutambi nemutengesi vose vanofanira kuvavarira kuva nemakadhi anokosha huwandu huri pedyo nemakumi maviri nerimwechete. Pamutemo ukadarika nhamba iyi, unenge watokundikana paruoko rwaunenge uchitamba.
Chati yemitemo yeblackjack inoti ace ndiro kadhi rinonyanyoita zvakasiyana-siyana mumutambo uyu. Mumwe mutemo wakanakira mutambi ndewekuti ace inokosha chibodzwa chimwechete kana kuti gumi nechimwechete, sarudza zvinokuitira panguva iyoyo. Makadhi 10 kusvika K anokosha zvibodzwa gumi kuchitiwo kubva pa 2 kusvika pa 9 anoramba aine zvibodzwa zvawo zvakanyorwa pakadhi.
Macasino anokuudza mari inodikanwa kuti utange kubheja neyakawandisisa yacho pakubheja.
Mutambo unotanga kana waisa mari yekutangisa kubheja, mutengesi anokupa makadhi maviri obva aita kuti mamwe acho azvitambire oga. Mutemo unoti iwe ingovavarira kusvika pana 21, ukawana boka rina A kusvika 10 unenge warova inonzi “natural.” Unobva watokunda paruoko rwauri kutamba ndokunge usina kuita mangange nemutengesi.
Ungangonetseka nekuti makadhi ako maviri anooneka patafura asi mutengesi achibvumidzwa kuti rimwechete remakadhi ake rioneke kumutambi. Unozoona makadhi ese kana nguva yekumaratidza kwekupedzisira yakwana.
Makadhi maviri ekutanga anoumba ruoko rwakaoma kana kuti rwakapfava.
Ruoko rwakapfava rune kadhi rerudzi rwe ace.
Ruoko rwakaoma haruna ace.
Zvichienderana nemasimbiro eruoko rwako, unokwanisa kuita zvinotevera zviri pamutemo:
Mira – ramba uine makadhi ako.
Rova – Kumbira rumwe ruoko kumutengesi.
Patsanura– Unoita izvi kana uchinge wawana makadhi maviri. Zvinokubvumidza kutamba nemaoko maviri pachinzvimbo cheruoko rumwe chete.
Kaviri pasi – Kumbira rimwe kadhi kuwedzera pakubheja
Kuzvipira – mimwe yemitambo iyi haibvumidze kuzvipira, zvisinei iyi inzira yakanaka kudzora paunenge uchikundikana.
Kana wapedza kuumba ruoko rwako, chienzanisa zvauinazvo nezvine mutengesi. Anenge awana zviri pedyo na 21 ndiye anenge akunda, mutambo wotambwa zvekare.
Ungakunda sei pa Backjack
Ziva pekupatsanura nepekusapatsanura. Mukana wekukunda unowedzera ukapatsanura ma ace nema 8. Nguvadzose chengetedza makadhi maviri kubva pa 10 kuzvika pana K muruoko. Tevedzera mitemo kana uchida kukunda pablackjack yepa chivhitivhiti.
Ita sarudzo ineungwaru zvichienderana kweruoko rwekutanga. Udza mutengesi kuti “akurove” kana uine ruoko rune makadhi anokosha gumi nerimwechete zvichidzika. Tevedzera moyo wako (kana chati yeblackjack) wokumbira rimwe kadhi kana uine makadhi anobvira pa 12 kusvika ku 16. Chimwe chidobi kusimuka kana makadhi ako akasanganiswa osvika pa 17 zvichikwira.
Hapana zano rinovimbisa kukunda nguva dzose. Zvisinei, kushandisa zvidobi zvedu kunobatsira kuti uone zano rekukunda usingaverenge makadhi.
Wakawana ruzivo urwu achibatsira?
Thanks, tinoonga mhinduro yako!
Ndapota inotiudzei sei nyaya ino inogona kunatsiridzwa